कस्तो रह्यो ‘जात्रै जात्रा’ र ‘वीर विक्रम २’को व्यापार ? « रंग खबर
कस्तो रह्यो ‘जात्रै जात्रा’ र ‘वीर विक्रम २’को व्यापार ?
रंगखबर, काठमाडौँ – शुक्रबार रिलिज भएका फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ र ‘वीर विक्रम २’ले शनिबारको दिन हलमा दर्शक भरेका छन् । प्रदीप भट्टराई निर्देशित ‘जात्रै जात्रा’ले मल्टीप्लेक्समा आक्रामक व्यापार गर्दा सिंगल स्क्रिनमा पनि दर्शकको साथ उल्लेख्य रह्यो । शुक्रबार पनि फिल्मको व्यापार सुखद थियो ।
१० किलो सुनको कथामा बनेको फिल्म ‘जात्रै जात्रा’मा विपिन कार्की, रविन्द्र झा, रविन्द्र सिंह बानियाँ, वर्षा राउत र दयाहाङ, राजाराम पौडेलको मुख्य भूमिका छ ।